Booliska Malmö oo nin soo xiray | Somaliska
Booliiska magaalada Malmö ayaa gacanta ku soo dhigay nin 38 jir ah oo lagu tuhmayo inuu ka dambeeyay weeraradii dhawaan magaalada gilgilay ee lagu qaaday dadka soo galootiga ah. Ninkaan ayay booliisku gurigiisa ugu dheceen galabnimadii sabtida ayagoo sheegay in ay shagi dheer iyo baaritaan ka dib ay go'aan sadeen in ay soo xiraan. Guriga ninka ayaa sidoo kale laga helay 2 qori oo uu si sharci ah u haystay. Ninkaan ayaa wajihi doono dhowr dambii oo lagu soo oogay sida dil iyo isku day dil balse booliiska ayaa sheegay in aysan oran karin in dhibaatadii ka taagnayd magaalada Malmö la xaliyay hada oo laga yaabo in ay qaldami karaan. Magaalada Malmö ayaa isbuucyadii ugu dambeeyay soo wajahday xaalad jahwareer ah ka dib markii uu soo baxay nin si gaar u raadsanaya dadka soo galootiga ah asagoo dhowr qof xabada ku furay, 1 qof ayuu dilay tobaneeyo kalena wuu dhaawacay.
Booliiska magaalada Malmö ayaa gacanta ku soo dhigay nin 38 jir ah oo lagu tuhmayo inuu ka dambeeyay weeraradii dhawaan magaalada gilgilay ee lagu qaaday dadka soo galootiga ah. Ninkaan ayay booliisku gurigiisa ugu dheceen galabnimadii sabtida ayagoo sheegay in ay shagi dheer iyo baaritaan ka dib ay go’aan sadeen in ay soo xiraan. Guriga ninka ayaa sidoo kale laga helay 2 qori oo uu si sharci ah u haystay.
Ninkaan ayaa wajihi doono dhowr dambii oo lagu soo oogay sida dil iyo isku day dil balse booliiska ayaa sheegay in aysan oran karin in dhibaatadii ka taagnayd magaalada Malmö la xaliyay hada oo laga yaabo in ay qaldami karaan.
Magaalada Malmö ayaa isbuucyadii ugu dambeeyay soo wajahday xaalad jahwareer ah ka dib markii uu soo baxay nin si gaar u raadsanaya dadka soo galootiga ah asagoo dhowr qof xabada ku furay, 1 qof ayuu dilay tobaneeyo kalena wuu dhaawacay.
Waa sanadguurada Somaliska.com